Dad ku dhintay Gaari lagu rasaaseeyay Galgaduud | KEYDMEDIA ONLINE
Dad ku dhintay Gaari lagu rasaaseeyay Galgaduud
Dhaxdadan ayaa kusoo beegmaysa xili xiisad colaadeed oo u dhaxeysa laba beelood maal mahaan ka taagnayd degaanka Xananbuure ee gobolka Galgaduud.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Hal qof ayaa dhintay, labo kalena way dhaawacmeen kadib markii dabely hubeysan ay rasaas ku fureen gaari rakaab oo marayay degaan lagu magacaabo Xananbuure, ee gobolka Galgaduud.
Gaarigii soo qaadey dhaawacyadda weerarka hore ayaa isna loo galay jidka xili uu kusii jeeday magaaladda Cadaado, waxaana ku dhintay rasaastii lagu furey hal qof oo kale, iyadoo uu ku dhaawacmay darawalka.
Dhacdooyinka ayaa kusoo beegmaya xili xiisad dagaal oo u dhaxaysa labo beelood ay ka taagan tahay degaanka Xananbuure iyo tuulooyinka ku dhaw, waxaana jirin cid ukala dabqaadeysa dhinacyada ama Maamul soo farageliyay.
Saraakiisha Galmudug wali kama aysan hadlin xiisadda taagan iyo dadka shacabka ah ee lagu dilay Xananbuure.
0 Comments Topics: al-shabaab dagaal galgaguud
Itoobiya oo fashilisay weerar Al-Shabaab
Warar 31 July 2021 19:11
Wararkii ugu dambeeyay dagaalka gobolka Mudug
Warar 24 July 2021 19:35